21 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 21 2013
ပြပွဲအတ္တသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ, OS နှင့်ငါ ARUS ကျင်းပလိမ့်မည်များအတွက်တူရကီက Metro ရထားနှင့် Ankaray အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်လိမ့်မည် တူရကီနှင့်ဒေသခံအတွက်တူရကီက Metro ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်နှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် Ankaray Metro နှင့်ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ [ပို ... ]
နှောင်းပိုင်းတွင်အသက်တာ၌ Nigde ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကစီမံကိန်း
နှောင်းပိုင်းတွင်အသက်တာ၌ Nigde ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center က Project မှ: AK ပါတီ Nigde လက်ထောက် Alpaslan အားကစားသမားများ, တင်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ပွညျသူပွညျသား 250 ဧကကျော်မီးရထားသူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်စတင်ခဲ့ဟုပြောသည်။ ပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Ahmet Ozmen [ပို ... ]
ဤရွေ့ကားရထား Bursa မှအလျင်အမြန်လာမည်
ဤသည်လမ်းကြောင်းသစ်လျှင်မြန်စွာ Bursa ထံသို့ လာ. ငါသည်တ phobia '' ရထား '' ရှိငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေကျော် left ခဲ့သည်။ ငါရေးအဟောင်းပေမယ့်ကျယ်လောင်အသံတပြည်လုံးကိုရထားစီးရထားထဲမှာကျွန်မအလေးအနက် phobia ခဲ့သတိရပါ။ အဆိုပါရထားငါ့ကိုပယ်ရသည့်အခါ [ပို ... ]
မော်စကိုသင်မော်စကိုပန်းချီကားတစ်ဦးရထားကြုံတွေ့ရသည့်အခါထွက်လာလတံ့သောအရာကိုအချို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပင်ယနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရထားစီးဘို့စောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင် line ကနေနက်ပြာရောင်ရထားငါ့ကိုအံ့အားသင့်။ ရထားအပြင်ဘက်မှာတခြားရထားထံမှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
အရစ်ကျ၏ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်xnumx.bölg TCDD ညွှန်ကြားမှုကမ်းလှမ်းချက် SUBJECT ကိုတင်ဒါမပါလိမ့်မယ်နှင့်ဆက်စပ် Entity3ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီး။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD ညွှန်ကြားမှုxnumx.bölgခ) လိပ်စာ [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကတ္တရာသုံးအတူ Derince ဆိပ်ကမ်းလမ်းခင်းဖို့Yaptırılacaktır
Agrega 4734 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရေတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်လမ်းခင်းYaptırılacaktır Derince ဆိပ်ကမ်းလမ်းမကြီးသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) DERİNCEဆိပ်ကမ်း Operation Manager နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆိပ်ကမ်းလမ်း, ဖြစ် [ပို ... ]
RayHaber 21.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
Ray Otobüslerinin İklimlendirme Ünitesi ve Radyatör Fanlarının Tahrik Sistemlerinin Malzemeli Olarak Bakım ve Onarım İşi Çelik Halat Satın Alınacaktır (TÜDEMSAŞ) Bilezik Susta Demeti Satın Alınacaktır (TÜDEMSAŞ) Benzer Demiryolu Haberleri ve İlginizi Çekebilecek Diğer HaberlerRayHaber 02.01.2013 [ပို ... ]
မြို့တော် Cosmodrome စခန်းဟာ YHT-ရှာနေမှီဖို့
21 / 05 / 2013 Levent Ozen 1
မြို့တော် Cosmodrome မြို့တော်တူရကီ, "အာကာသအခြေစိုက်စခန်း" High Speed ​​ရထား (YHT) တစ်ဘူတာလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှာဖွေနေမှရတဲ့ YHT ဘူတာလိုက်ရှာ။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim နုတူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားဘူတာကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ [ပို ... ]
Project မှမနက်ဖြန် Tunektepe ၏အခြေခံ Ropeway အတွက်ချွတ်ကိုစလှေတျ
Antalya ပြည်နယ်အထွေထွေညီလာခံ MHP အဖွဲ့ဝင် Mustafa Sünbül izgonen Tunektepe Cable ကိုကား Project မှအခြေခံပညာမနက်ဖြန်, 13 သန်းကြေညာဖို့ပစ်ချ 22 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ (မနက်ဖြန်) ၏တန်ဖိုးရှိ Tunektepe Cable ကိုမော်တော်ကားစီမံကိန်းအခြေခံအုတ်မြစ် "MHP နှင့် CHP ညွန့်ပေါင်းဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောပေါက် [ပို ... ]
တူရကီတုံ့ပြန်ခုနှစ်တွင်မြေအောက်ရထားဆယ်ကျော်သက်ဂစ်တာ (ဗီဒီယို) ကစား
Ankara metrosunda gitar çalan gence tepki Ankara Metrosu’nda gitar çalan genci uyaran adam tepkiye maruz kaldı. Müziğin sesinden o an için rahatsız olup bunu dile getiren vatandaş, kendine göre haklıdır belki. Yorgundur, o an için [ပို ... ]
OSB ဘူတာမှမီးရထားလိုင်းကနေကျင်းပလိမ့်မည် | ကုန်တင်ရထား
တစ်ဦးထက်ပိုအကျိုးရှိအနေအထားသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဘူတာရုံတရားမျှတရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပါတီ (AK ပါတီ) ဗန်လက်ထောက် Mustafa ပရောဖက်ဖို့မီးရထားလမ်းလုပ်ဖို့, ဗန်ဒေသတွင်း၌ xnumx'nc ကြောင့်မက်လုံးပေးကနေအကျိုးရှိမည်သူကိုထက် OSB, ဖွဲ့စည်းထားခြင်းစက်မှုဇုံကနေရထားဘူတာရုံ [ပို ... ]
native လမ်းရထား Silkworm Met Ray မြို့ရင်ပြင် (ဗီဒီယို - ဓာတ်ပုံပြခန်း)
native လမ်းရထား Silkworm Met Ray မြို့ရင်ပြင်။ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းဖြစ်မြို့စတုရန်းအတွက်မိတ်ဆက်ပြသလမ်းရထား '' Silkworm 'နှင့်အတူတိုင်ပင်အတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, အမြင်အာရုံ tools တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံသားအကြောင်းကို2လအတွင်းခရီးစဉ်စေမည် [ပို ... ]
Bursaray ရထားလိုင်းလေ့လာဖို့စတင်ပါပြီ Kestel ကိုချုံ့
ရထားကြမ်းပြင်၏ Bursaray Kestel လိုင်းလေ့လာမှစတင်: Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ချောမွေ့စွာနှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြို့တော်ရဲ့အရှေ့ပိုင်း Bursaray နှင့်အတူ Kestel လိုင်းပြီးစီးဆောက်လုပ်ရေး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းမှဖြည့်ဆည်းဖို့ projected အသုံးပြုပုံအလုပ်တင်သောကိုခြေရာခံစတင်ခဲ့ပါသည်။ ဘူတာထဲမှာŞirinevler [ပို ... ]
Bursanınရှေ့ဆက်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သွားရွေးကောက်ပွဲအတွက်အစိမ်းရောင်-အဖြူကေဘယ်လ်ကားအင်တာနက်ကိုစစ်တမ်းအဘို့အအရောင်အတွက်ရှေ့ဆက်အစိမ်းရောင်-အဖြူသွားအသစ်တစ်ခုကေဘယ်လ်ကား Cabin စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သို့သော်အထူးသဖြင့်အများပြည်သူအတွက်ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုဒီအရောင်ကိုမြင်narçiçeðiအဆိုပါ Silkworm လမ်းရထား၏အရောင်နှင့်အတူ ... [ပို ... ]
ဝန်ကြီးYıldırım:3လေဆိပ်ပန်းပွင့်နှင့်တူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
ဝန်ကြီးYıldırım:3လေဆိပ်, ပန်းပွင့်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်အစ္စတန်ဘူလ်3တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ လေဆိပ်အပွားတူရကီရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာစီမံကိန်းအာရုံကိုဆွဲငင်။ ဝန်ကြီးYıldırım "ဟုအဆိုပါစီမံကိန်းအားများအတွက်ကန်ထရိုက်တာအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရှာနေအကြောင်းကိုစကားပြောနေပါသည်, 'နောက်ထပ် [ပို ... ]
နောက်ဆုံးတော့အမှုကိုပြု Sanliurfa Metrobus နူးညံ့sanlıurfa.comယခင်က Metrobus များအတွက်တင်ဒါနောက်ဆုံးတွင်အမှုကိုပြုကြေညာခဲ့သည်။ သတ်မှတ်ချက်များ၏ 20 ဇွန်လရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် Metrobus နူးညံ့ပြင်ဆင်ကြ၏။ တဦးတည်းလျှပ်စစ်ဓါတ်အားသို့မဟုတ်ဒီဇယ် Metrobus နူးညံ့ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ် 8 30 သန်းပေါင်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
ရာစုစီမံကိန်း Marmaray လမ်းကြောင်း
ရာစုစီမံကိန်း Marmaray လမ်းကြောင်း: ဆောက်လုပ်ရေးအောက်တိုဘာလ 2004 29 2013 စတင်ခဲ့နှင့် Marmaray စီမံကိန်းကိုများအတွက်စီစဉ်ထားလမ်းကြောင်းအပေါ်အဖွင့်, သင်သတင်းဆနျးစစျနိုငျသညျ။ ဤတွင်လမ်းကြောင်း ... Marmaray Bosphorus တံတားကိုလည်းပမာဏလျှော့ချရည်ရွယ်သည့် FSM တံတား [ပို ... ]
Project မှမနက်ဖြန် Antalya Tunektepe ၏အခြေခံ Ropeway အတွက်ချွတ်ကိုစလှေတျ
Antalya Antalya ပြည်နယ်အထွေထွေညီလာခံ MHP အဖွဲ့ဝင် Mustafa Sünbül izgonen Tunektepe Cable ကိုကား Project မှအခြေခံပညာမနက်ဖြန်, 13 သန်းတန်ဖိုးရှိ MHP မှာကျင်းပကြေညာဖို့ပစ်ချ 22 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ (မနက်ဖြန်) ၏ Tunektepe Cable ကိုမော်တော်ကားစီမံကိန်းအခြေခံအုတ်မြစ် "နှင့် CHP ညွန့်ပေါင်းကြောင်း [ပို ... ]
ရထားမြို့မှ kb ကျောင်းသားများသင်ဟာယဉ်Karabükတက္ကသိုလ် (KBU) ပါမောက္ခချုပ် prof.dr.burhanet ရွှေ့မည်, ရထားစနစ်များချိုင့်ဖြစ်လာဆီသို့လျှင်မြန်စွာရွေ့လျားခြင်းနှင့်ရထားလမ်းစနစ်ကအကြားဤအခြေအနေတွင်ဇာတိမြို့တက္ကသိုလ်ထံသို့မကြာမီတည်လိမ့်ပြောသည်နေကြသည်။ ပါမောက္ခချုပ် Uysal, တူရကီတစ်ဦးပထမဦးဆုံး [ပို ... ]